1999 naorina ny orinasa
2003 Rafitra fitantanana kalitao ISO9001 voamarina
2005 Laboratoara maoderina sy avo lenta napetraka
2008 Ny vokatray dia nandalo UL, CE
2009 Ny varotra isan-taona dia nihoatra ny 100 tapitrisa CNY voalohany
2013 Nampidirina ny SAP System, niditra tamin'ny vanim-potoana vaovao fitantanana rafitra ny orinasa
2014 Orinasa teknolojia avo lenta sy vokatra marika malaza
2015 Nahazo mari-pankasitrahana IATF16949 System; Nahazo ny anaram-boninahitra "Marika Malaza any Shanghai" sy "Giant Technological Small"
2016 Natomboka ny fanavaozana ny fizarana sy ny fikasana ho voatanisa. Niorina ny Weyer Precision Technology (Shanghai) Co., Ltd.
2017 Vondron'olom-pirenena sivilizasiona Shanghai; Ny vokatray dia efa nandalo ATEX & IECEX
2018 DNV.GL fanamarinana fiarahamonina fanamarinana; Nampiasaina i Weyer Precision
2019 20 taona fitsingerenan'ny WEYER
Niorina tamin'ny taona 1999, Shanghai Weyer Electric Co., Ltd. dia orinasam-teknolojia avo lenta manokana amin'ny famokarana fantsom-pifandraisana, fantson-drano sy fantsona fantsom-pifandraisana, rojo tariby ary mpampifandray plug-in. Izahay dia mpamatsy vahaolana amin'ny rafitra fiarovana tariby, miaro tariby any an-tsaha toy ny fiara angovo vaovao, lalamby, fitaovana aerospace, robot, fitaovana famokarana herinaratra, fitaovana mekanika, milina fananganana, fametrahana herinaratra, jiro, ascenseur, sns. 20 taona niainana ho an'ny rafitra fiarovana tariby, WEYER dia nahazo ny lazany avy amin'ny mpanjifa sy ny mpampiasa farany ao an-trano sy any ivelany.
Ny kalitao dia singa iray lehibe amin'ny filozofia orinasa WEYER. Manana ekipa fitantanana kalitao mahomby mizaha toetra matetika sy kisendrasendra ny vokatra ao amin'ny laboratoara iraisam-pirenena izahay. Manome toky ny kalitaon'ny vokatray izahay eo ambanin'ny fampiasana mahazatra ary manome serivisy aorian'ny serivisy haingana ho an'ny fikojakojana ny vokatra. Ny fitantanana kalitao dia voamarina araka ny ISO9001 & IATF16949.
Mitarika ny fanavaozana ny teknolojia. Izahay dia mivoatra sy manamboatra vola mitohy, famokarana vaovao, milina ary teknolojia. Manana ekipa R&D matanjaka izahay hamorona vahaolana famolavolana vaovao hanampiana ireo mpampiasa farany miaro ny fiarovana ny tariby ary manampy tombony ara-toekarena. Manana ekipa bobongolo matihanina koa izahay hanatsara ny firafitry ny bobongolo amin'ny alàlan'ny teknolojia bobongolo farany hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra sy hampihenana ny vidiny.
Weyer dia manana fotokevitra ambony momba ny serivisy: andramo ny tsara indrindra mba hanomezana ho an'ny mpanjifa serivisy haingam-pandeha, marika ary haingana. Weyer dia manolotra vahaolana tsara indrindra ho an'ny tetikasa hahatonga ny rafitra fiarovana tonga lafatra. Weyer dia mandefa ara-potoana hatrany mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa. Weyer dia manome hatrany aorian'ny serivisy mahomby amin'ny fametrahana sy fikojakojana.
1. Masinina tsindrona
2. Ivotoerana famahanana fitaovana
3. Masinina fanodinana vy
4. Milina bobongolo
5. Faritra fitehirizana
6. Faritra fitehirizana 2